बुहारी हत्या प्रकरणः छोराको मृत्युपछि प्राप्त हुने ३८ लाख रूपैयाँको लोभमा सुस्मिताको हत्या
काठमाडौं। हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ कर्राकी सुस्मिता थापा क्षेत्रीको हत्या उनकै सासु, ससुरा र नन्द मिलेर गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। करीब ८ महिना अघि सुस्मिताका श्रीमान रुपेन्द्रको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो।
प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी हत्यामा संलग्न रहेको भनिएका चारैजनालाई सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयम मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी ईन्द्र बहादुर रानाका अनुसार हत्या गर्नुको मुख्य कारण दुईवटा देखिएको छ। एउटा, रुपेन्द्रको मृत्युपछि बीमा, अफिसबाट दिइने रकमको लोभ र अर्को, रुपेन्द्रको मृत्यु हुनुको कारण सुस्मिता रहेको गलत विश्वास। यिनै दुई कारणले योजनाबद्धरुपमा सुस्मिताको हत्या भएको प्रहरी प्रवक्ता रानाले बताए।
प्रहरीका अनुसार सुस्मिताको हत्यामा ससुरा प्रकाश थापा र नन्द सीता थापा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न थिए। जसमा सासु तुलसा थापा र जेठी नन्द दुर्गा थापा कार्कीको सहयोग रह्यो। असार १ गते राति सुस्मिताको हत्या भएको थियो।
२०७६ बैशाख १८ गते मकवानपुरका रुपेन्द्र थापा र कपिलवस्तुकी सुस्मिता क्षेत्री थापाबीच विवाह भयो। रुपेन्द्र क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल नेपाल प्रा.लि. हेटौंडामा काम गर्थे।
विवाह भएको पहिलो वर्ष रुपेन्द्र श्रीमतीसहित दशैंको टीका थाप्न कपिलवस्तुस्थित ससुराली गएका थिए। टीका लगाएर घरतर्फ फर्कंदैगर्दा नवलपरासीको दाउन्नेमा सवारी दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो। श्रीमानको मृत्युपछि सुरु भयो सुस्मितामाथि घरेलु हिंसा।
दिनुहुँजसो छोरा तेरै कारणले मरेको भन्ने लाञ्छना लगाउने र यातना दिने काम भयो। त्यतिमात्र नभई श्रीमान वितेको पीडामा रहेकी सुस्मितामाथि ससुराले यौन दुर्व्यवहारसम्म गरे। ससुरा प्रकाशबाट बाथरूममा जबर्जस्ती करणीको प्रयास भयो।
रूपेन्द्रको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्ति वापत पाउने ५ लाख रुपैयाँ हकवाला मृतक सुस्मिता क्षेत्री थापाले प्राप्त गरेपछि विवाद सुरू भएको थियो। रुपेन्द्रले काम गर्ने क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल नेपाल प्रालि हेटौंडाबाट बीमा, बोनस, तलब भत्ताको बाँकी रकम वापत एकमुष्ठ अठतीस लाख २८ हजार चार सय बहत्तर रुपैयाँ अझै प्राप्त हुने थियो। जुन विषयमा हकवालाहरू बाबु प्रकाश, आमा तुलसासँग सुस्मिताको विवाद झनै चुलिएको थियो।
विवादकै कारण हालसम्म रुपेन्द्रले काम गर्ने कम्पनीबाट उक्त रकम परिवारका सदस्यले पाएका छैनन्। उनको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउनुपर्ने एकलाख ७७ हजार ९४८ रुपैयाँ पनि मृतक सुस्मिता क्षेत्रीको खातामा जम्मा भएको थियो।
नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्सबाट रुपेन्द्र को दश लाख बचत, अमृत सावधिक जीवन बिमालेख दाबी भुक्तानी बापतको १० लाख ६३ हजार ९१४ रुपैयाँ भने बुबा प्रकाश थापाले लिई सकेको थिए।
मृतक सुस्मिता क्षेत्री थापालाई प्राप्त हुने सबै रकम निकालेर घरमा ससुरालाई दिनुपर्छ भनी सुस्मितालाई घर-परिवारबाट बारम्बार दवाव दिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
महिनावारी भएको बेला हत्या
असार १ गते राति साढे ९ बजे ससुरा प्रकाश र सासु तुलसा खाना खाएर सुत्ने कोठा तर्फ गए। खाना खानुभन्दा अगाडि ससुरा प्रकाशले रक्सी खाएका थिए। नन्द सीता र मृतक सुस्मिता भान्छामा खाना खाइरहेका थिए।
सुस्मिता महिनावारी भएकाले भुइँमा बसेर खाना खाँदै थिइन्। त्यसैबेला ससुराले काठको लौरोले एक्कासी बुहारीको टाउकोमा प्रहार गरे र सुस्मिता भुँईमा लडिन्। नन्द सीताले समेत भाउजु माथि प्रहार गरिन्।
सुस्मिताको बचाउ-बचाउ भन्ने चित्कार सुनेपछि सासु तुलसा पुगिन्। तर उनलाई बाबु-छोरी मिलेर फर्काइदिए। “ससुरा र नन्द सीताले पटक-पटक काठको लौरो र लोहोरोले निर्ममता पूर्वक सुस्मितामाथि प्रहार गरी हत्या गरे”, प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
बाबु-छोरी मिलेर घटनास्थललाई आत्महत्या गरेजस्तो देखाउन खोजेका थिए। उनीहरूले सुस्मिताको हत्याका क्रममा छरपस्ट भएका सबै सामानहरू मिलाए। रगतका टाटाहरू पुछे। अनि भान्छा कोठाको ढोकाको चुक्कुल भित्रबाट लगाई पछाडिको स्लाइडर झ्यालबाट निस्केका थिए। “झ्यालबाट निस्किएपछि बाबु-छोरी दुवै जनाले रगत लागेका कपडाहरू धोए अनि कोठामा गए”, हत्यामा संलग्नहरुको बयानपछि प्रहरीले भनेको छ।
विहान भएपछि मूल ढोकाको च्यानल गेट खोलेर छर-छिमेकमा गई सुस्मिताले आत्महत्या गरेको भन्ने हल्ला गरे। त्यसपछि छिमेकीले नै प्रहरीलाई घटनाबारे खबर गरेका थिए।
प्रकाशित: सोमबार, असार १५, २०७७ १९:१७
हत्यामा ससुरा र कान्छी नन्द प्रत्यक्ष संलग्न, सासु र जेठी नन्दको सहयोग
रुपेन्द्रको मृत्युपछि प्राप्त हुने बीमा रकम तथा कार्यालयले उपलब्ध गराउने रकमको विषयमा झगडा थियो
एक रूपैयाँले बढ्याे पेट्रोलियम पदार्थकाे मूल्य
शुक्रबार, असार २६, २०७७ २१:१७
दिनभरको बाढी-पहिरो अपडेटः २३ जनाको मृत्यु्, ३६ बेपत्ता, २६ जना घाइते
शुक्रबार, असार २६, २०७७ २१:०७
आन्तरिक समस्यामा अल्झिएर जनताको जीवनरक्षाको दायित्वबाट विमुख बन्न मिल्दैनः प्रधानमन्त्री ओली
शुक्रबार, असार २६, २०७७ २१:०५
विपद्को समय सबैलाई उद्धारमा जुट्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
शुक्रबार, असार २६, २०७७ २१:०३
म आत्महत्या गर्दिनँ (भिडिओसहित)
सोमबार, असार २२, २०७७ १५:४६
सरकारले बाँच्दा कर उठाउला, मर्दा बचाउन आउँदैन मैले आत्महत्या गरे पनि सरकार मलाई बचाउन नआउने रहेछ मेरो साथी भीमको आत्महत्याले कसलाई फरक...
भारतीय मिडियामा नेपाली अभिनेत्रीको चर्चा
बुधबार, असार २४, २०७७ १८:१०
ओलीलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट र नेपाल अध्यक्षबाट हटाउन चाहन्छन्, किन ?
मंगलबार, असार २३, २०७७ १९:५५
बन्दाबन्दीमा पनि राेकिएनन् प्रकृतिप्रेमी पर्यटक
मंगलबार, असार २३, २०७७ ११:२६
पहिरोमा पुरिएर पोखराका सातजनाको मृत्यु, १० घाइते
शुक्रबार, असार २६, २०७७ ११:४१
समाज शिक्षा कोभिड–१९ महामारी
रोकिएन निजी विद्यालयको दबाब (भिडिओसहित)
शुक्रबार, असार २६, २०७७ ०९:३०
बाल गायिका समिक्षा अधिकारी, ‘धेरै गीत गाउँदा स्वरमा समस्या आयो’
बिहिबार, असार २५, २०७७ ०९:०६
आपराधिक गतिविधिमा प्रहरीको संलग्नता बढ्दो
मंगलबार, असार २३, २०७७ १३:२२